Ihe Ị Ga-eme ma Nnukwu Nsogbu Bịara Gị | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Nsogbu nwere ike ịbịara onye ọ bụla. Baịbụl kwuru, sị: “Ọ bụghị ndị nwere ụkwụ ọsọ na-emeri n’ọsọ, ọ bụghịkwa ndị dị ike na-emeri n’agha.” Ọ sịrị na “oge ọdachi na ihe a na-atụghị anya ya na-abịakwasị ha niile.” (Ekliziastis 9:11) Ndị na-eto eto sokwa ná ndị nnukwu nsogbu bịarala. Olee ihe nyeere ụfọdụ n’ime ha aka idi nsogbu ndị ahụ? Ka anyị tụlee ihe mmadụ abụọ kwuru.
Mama m na papa m gbara alụkwaghịm mgbe m dị afọ iri na anọ.
M gwara onwe m na ọ bụghị alụkwaghịm ka ha gbara, kama na papa m chọrọ ịnọtụ naanị ya obere oge. Ọ hụrụ mama m n’anya, gịnịkwanụ mere ọ ga-eji hapụ ya, hapụkwa mụnwa?
O siiri m ike ịkọrọ onye ọ bụla ihe na-emenụ. Achọghị m ịna-eche banyere ya. Iwe nọ na-ewe m, ma amaghị. O meziri ka m na-echegbu onwe m, anaghịkwa m ehi ụra nke ọma.
Mgbe m dị afọ iri na itoolu, ọrịa kansa gburu mama m. Ọ bụ ezigbo enyi m.
Alụkwaghịm mama m na papa m gbara wutere m nke ukwuu, ma ọnwụ mama m gbawara m obi. Ọ pụchabeghị m n’ahụ́. Ọ na-esiziri m ike ihi ụra, m ka na-echegbukwa onwe m.
Ma, e nweela ụfọdụ ihe ndị nyeerela m aka. Dị ka ihe atụ, Ilu 18:1 gwara anyị ka anyị ghara ịna-akpa iche. N’ihi ya, m na-agbalị ịkpa ndị ọzọ nso.
Ebe m bụ Onyeàmà Jehova, m na-agba mbọ agụ akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl bụ́ ndị na-agba m ume. Otu n’ime akwụkwọ ndị nyeere m aka mgbe mama m na papa m gbara alụkwaghịm bụ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè. M chetara na m gụrụ isiokwu bụ́ “M̀ Nwere Ike Inwe Obi Ụtọ Ma Ọ Bụrụ na M Si n’Ezinụlọ Nwere Naanị Nne Ma Ọ Bụ Nna?” nke dị n’akwụkwọ ahụ Nke 2.
Otu n’ime amaokwu Baịbụl ndị kacha nyere m aka ịkwụsị ichegbu onwe m bụ Matiu 6:25-34. N’amaokwu nke 27, Jizọs jụrụ, sị: “Ònye n’ime unu pụrụ ịgbakwụnye otu kubit * n’afọ ndụ ya site n’ichegbu onwe ya?”
O nweghị mgbe nsogbu na-agaghị na-abịara anyị, ma m mụtara n’aka mama m na ihe ka mkpa bụ otú anyị si edi nsogbu ndị ahụ. Ọtụtụ nsogbu bịaara ya. A gbara ya alụkwaghịm, ya adaakwa ajọ ọrịa, ma ọ daghị mbà. Okwukwe ya n’ebe Chineke nọ siri ike ruokwa mgbe ọ nwụrụ. Agaghị m echefu ihe ndị ọ kụziiri m banyere Jehova.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee otú ịgụ Baịbụl na akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl ga-esi nyere gị aka idi nsogbu ndị bịaara gị?—Abụ Ọma 94:19.
Mgbe m gbara afọ iri na asaa, anọ m na-ele papa m anya ya ekubie ume. Ọnwụ ya bụ ihe ọjọọ kacha mee m. Obi gbawara m.
Ọ dị m ka ọ nwụghị anwụ, nakwa na ọ bụghị papa m ka e kpuchiri ákwà. M gwara onwe m na ọ ga-eteta n’echi ya. Ike ụwa gwụrụ m.
Mụ na ndị ezinụlọ anyị bụ Ndịàmà Jehova. Ndị ọgbakọ anyị nyeere anyị ezigbo aka n’oge ahụ papa m nwụrụ. Ha nyere anyị nri, nọnyekwara anyị ruo ogologo oge. Otú ha si nyere anyị aka mere ka obi sie mụ ike na Ndịàmà Jehova bụ ezigbo Ndị Kraịst.—Jọn 13:35.
Ebe gbara m ezigbo ume na Baịbụl bụ 2 Ndị Kọrịnt 4:17, 18. Ebe ahụ sịrị: “Ọ bụ ezie na mkpagbu ahụ na-adịru nwa oge, dịkwa mfe, ọ na-arụpụtara anyị ebube nke na-adịwanye ukwuu, nke na-adịrukwa mgbe ebighị ebi; ebe anyị lekwasịrị anya, ọ bụghị n’ihe a na-ahụ anya, kama n’ihe a na-adịghị ahụ anya. N’ihi na ihe a na-ahụ anya na-adịru nwa oge, ma ihe a na-adịghị ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi.”
Amaokwu nke ikpeazụ ruru m n’obi. Papa m tara ahụhụ naanị nwa oge, ma ihe ndị Chineke ga-emere anyị n’ọdịnihu ga-adịru mgbe ebighị ebi. Ọnwụ papa m mere ka m chebara ihe m ji ndụ m eme echiche, mezie ka m kpebie ihe bara uru m ga-eji ndụ m mee.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee otú nsogbu bịaara gị nwere ike isi nyere gị aka ichebara ihe ndị i kpebiri iji ndụ gị eme echiche?—1 Jọn 2:17.
^ para. 14 Otu kubit dị ihe dị ka sentimita iri anọ na ise ma ọ bụ inch iri na asaa na ọkara.
Ezigbo Olileanya nke Dịịrị Ndị Ị Hụrụ n’Anya Nwụrụ Anwụ